Momba anay - Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd.
Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd. dia mpanamboatra sy mpanondrana matihanina izay mampiditra ny endrika, ny R&D, ny famokarana ary ny varotra ho an'ny fitaovana lithium vaovao. Feihu Technology dia manana zavamaniry maoderina, famokarana kilasy voalohany ary fitaovana fanandramana, izay mahatratra 30 000 metatra toradroa, velarana fananganana 20 000 metatra toradroa. Amin'izao fotoana izao, misy mpiasa 400 mahery, ao anatin'izany ny talenta matihanina ambony, ny fikambanana matanjaka ary ny ekipa marketing
Ny vokatray manarona fandavahana herinaratra 12 / 16.8v / 21V, valizy misy fiantraikany 21V, hety 21V, trimmer zaridaina Mini, basy fanadiovana tosidra ary vokatra vaovao hafa. Ny vokatray dia efa nandalo ny taratasy fanamarinana CE & GS, ary ny Feihu Technology koa dia nandalo ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2015. Manomboka amin'ny fanaraha-maso ireo akora sy singa ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana alohan'ny famoahana ireo vokatra, dia fehezin'ny teknisiana matihanina ny fizotrany rehetra hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra kilasy voalohany.
Ny orinasa misy anay dia ao amin'ny tanànan'i Jinhua, akaikin'ny seranan-tsambon'i Ningbo sy Shanghai, fitaterana mety ho an'ny fandefasana sy fitsidihana. Ny tambajotram-barotra dia mandrakotra firenena sy faritra maherin'ny 60 manerantany, toa an'i Azia atsimo atsinanana, Azia atsimo, Moyen Orient ary ny hafa. Ny fiantohana kalitao sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia laharam-pahamehan'ny orinasa Feihu Technology.
Manana andian-tsarimihetsika fitantanana fizarana kalitao sy efitrano fandraisam-bahiny izahay, mihoatra ny 20 ny fitaovana fitiliana mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra misy kalitao tsara alohan'ny fandefasana. Ny Feihu Technology dia mifototra amin'ny finoana tsara, famatsiana entana ampy, serivisy aorian'ny fivarotana tanteraka ho toy ny fotokevitra, ary nahazo fiderana avo avy amin'ireo mpivarotra na aiza na aiza
Manasa anao tamim-pahatsorana hitsidika anay ary hijery ny fanamboarana vokatra, ny fifehezana kalitao ary ny fahaizan'ny orinasa.